Posted on August 8, 2011 by Babukrishna	अन्जनप्रसाद पौड्याल
अञ्जनराज पौड्याल, अध्यक्ष स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालनेपाल शेयर दलाल संघका अध्यक्ष अन्जनप्रसाद पौड्याल थ्राइभ ब्रोकरेज हाउस प्रालिका महाप्रबन्धक एवम् नेपाल शेयर दलाल संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । करिब साढे दुई महिना अघि अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रका बाबुकृष्ण महर्जनले पुँजी बजारको समसामयिक पक्षबारे गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
प्राविधिक रुपमा हेर्दा पनि सीडीएस प्रणाली ल्याउने भनिएको छ । भाद्रसम्ममा सञ्चालनमा आउने भनिएको छ । तर आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजारलाई नभई नहुने सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनको लागि चार वटा कम्पनीले निवेदन दिइसकेको छ । अहिलेको बजारको अवस्थामा पनि कोष सञ्चालनमा आउन खोज्नु भनेको बजारमा तिनीहरुले केही फाइदा हुने लक्षण देख्नु हो । सीडीएस आउने वित्तिकै लामो कागजात जुटाइराख्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भइन्छ । त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी पाइपपाइनमा रहेका छन् । यी सबै सकारात्मक क्रियाकलापका कारण अन्य कुनै नीतिगत अवरोध आएन भने बजार आगामी दिनमा बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले शेयर मूल्य एकदमै तल झरेको स्थिति छ, अहिलेको मूल्यमा लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरेमा नाफा कमाउन सक्लान त ?
विगतमा शेयर बजारमा आम्दानी राम्रो भएका, ऐच्छिक अवकाश लिएकाहरु, व्यक्तिगत रुपमा कुनै रोजगारीमा नभएकाहरुको समूह लगानकिर्ता थिए । अहिले बजारमा स्नातक वा स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका युवा लगानीकर्ताहरु प्रवेश गरेको स्थिति छ । उहाँहरुले धेरै जिज्ञासाहरु राखिरहेको हुन्छ । उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि विभिन्न कम्पनीहरुको विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यो चाँही शेयर बजारको लागि खुशीको कुरा हो । हामी चाहन्छौ कि १० जना मानिसले १ लाख रुपियाँ लिएर आओस्, यसबाट लगानीकर्ताको संख्यामा त वृद्धि भयो नि । बजार वृद्धि गर्नमा उनीहरुले भूमिका निर्वाह गर्छन् । आफ्नै जोखिममा शेयर धितो कर्जाको मात्रा तोक्ने जिम्मा दिएपछिको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले शेयर धितो कर्जाको व्याजदर एकदम बढी छ । त्यस अनुसार बजारले प्रतिफल दिन सकेको छैन । केही समय पछि यसले सकारात्मक असर देखाउने आशा भए पनि अहिलेलाई यसले खासै असर पारेको देखिएन । यो ठिक समयमा आइदिएन । जुन बेला बजार ७ सयको हाराहारीमा स्थिर भइरहेको थियो, त्यसबेला आएको भए यसले केही असर देखाउँथ्यो होला । अहिले बजार घटेर २ सय ९२ भन्दा पनि तल झरेर फेरि बढेको स्थिति हो । अहिलेको स्थिति भनेको ऋण दिनेसँग त्यस्तो धेरै रकम ऋण दिने क्षमता पनि छैन भने ऋण लिनेले पनि त्यत्रो उच्च व्याजदरमा ऋण लिएर प्रतिफल पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रत्याभूति नै छैन । तत्कालको लागि हामीले शेयर मार्जिन कर्जामा दिइएको छुटले केही असर गर्ने देखेको छैन । अहिलेको स्थितिमा विदेशी लगानीकर्ता वा एनआरएनले नेपाली शेयर बजारमा लगानी गर्न आउलान त ?
Filed under: Share Market « तीन महिनासम्म किस्ता नतिरेमा पनि असल कर्जा अमेरिकाको रेटिङ घटेपछि एसियाको शेयर बजार गिरावट »